ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ – Page2– Shangyimm
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ရှောကျသီး၏ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးမြား
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ခွစှေယျငုပျခွငျး
ကင်မွန်းချဉ်ရွက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ရာသီမရွေးစားနိုင်တဲ့အစားအစားပါ။ ကင်မွန်းချဉ်ရွက် ဟာ ဈေးချိုပေမဲ့ အာဟာရဓာတ်မြင့်မားတဲ့ အစားအစာပါ။
ငါး နဲ့ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်ဟင်းချို ပူပူလေးသောက်ရင် နှာစေးချောင်းဆိုးစတဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဗိုင်းရပ်(စ်)ပိုးတွေရဲ့ ဒဏ်ကို အံ့သြ ဖွယ်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိ စေတာတွေ့ရပါတယ်။
လေပြွန် နဲ့ လည်ချောင်းရောင်ရမ်းမှု၊ အချွဲရည်ဂလင်း ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုပါ လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
အသားအရေကို စိုပြည်ဝင်းပစေတဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်မှာ အခြားအရွက်တွေထက်စာရင် အသားဓာတ် (၆.၄) ဂရမ်တောင် ပါတာတွေ့ရ ပါတယ်။
ကယ်လိုရီဓာတ်လည်း နည်းပါးပြီး အဆီဓာတ်လည်း မရှိသလောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချလိုသူများ စားပေးနိုင်ပါ တယ်။
ကင်မွန်းချဉ်ရွက် ၁၀၀ ဂရမ်မှာ ပါဝင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကတော့….
ဗီတာမင် A – ၇၈၈ အိုင်ယူ
ဗီတာမင် C – ၄၁ မီလီဂရမ်
ကယ်လ်ဆီယမ် – ၁၂၈.၃ မီလီဂရမ်
နိုင်ယာစင် – ၈.၅ မီလီဂရမ်
သံဓာတ် – ၃.၃ မီလီဂရမ်
ကငျမှနျးခဉျြရှကျဟာ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ ရာသီမရှေးစားနိုငျတဲ့အစားအစားပါ။ ကငျမှနျးခဉျြရှကျ ဟာ ဈေးခြိုပမေဲ့ အာဟာရဓာတျမွငျ့မားတဲ့ အစားအစာပါ။
ငါး နဲ့ ကငျပှနျးခဉျြရှကျဟငျးခြို ပူပူလေးသောကျရငျ နှာစေးခြောငျးဆိုးစတဲ့ အသကျရှူလမျးကွောငျးဆိုငျရာ ဗိုငျးရပျ(ဈ)ပိုးတှရေဲ့ ဒဏျကို အံ့သွ ဖှယျရာ ခံနိုငျရညျရှိ စတောတှရေ့ပါတယျ။
လပွှေနျ နဲ့ လညျခြောငျးရောငျရမျးမှု၊ အခြှဲရညျဂလငျး ရောငျရမျးမှုတှကေိုပါ လြော့ကစြနေိုငျပါတယျ။
အသားအရကေို စိုပွညျဝငျးပစတေဲ့ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးမြားလညျး ပါဝငျပါတယျ။
ကငျပှနျးခဉျြရှကျမှာ အခွားအရှကျတှထေကျစာရငျ အသားဓာတျ (၆.၄) ဂရမျတောငျ ပါတာတှရေ့ ပါတယျ။
ကယျလိုရီဓာတျလညျး နညျးပါးပွီး အဆီဓာတျလညျး မရှိသလောကျဖွဈတဲ့အတှကျ ကိုယျအလေးခြိနျ လြှော့ခလြိုသူမြား စားပေးနိုငျပါ တယျ။
ကငျမှနျးခဉျြရှကျ ၁၀၀ ဂရမျမှာ ပါဝငျတဲ့အာဟာရဓာတျတှကေတော့….
ဗီတာမငျ A – ၇၈၈ အိုငျယူ
ဗီတာမငျ C – ၄၁ မီလီဂရမျ
ကယျလျဆီယမျ – ၁၂၈.၃ မီလီဂရမျ
နိုငျယာစငျ – ၈.၅ မီလီဂရမျ
သံဓာတျ – ၃.၃ မီလီဂရမျ
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ကငျမှနျးခဉျြရှကျရဲ့ အစှမျး
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ဝမျးပကျြတတျရငျ ဒီလိုစား
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ပါဝါ(၃ဝဝ)မကျြမှနျထူကွီးတှေ လှငျ့ပဈရတယျဆိုပွီး သကျသသောဓကတှနေဲ့ နာမညျကွီး “ ဆေးငရုပျ ”
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ကြောနာ၊ ခါးနာတှကေို ပြောကျကငျးစနေိုငျတဲ့ အိပျစကျပုံ အနအေထား (၄)မြိုး
ကြောကျကပျမှာ တဈခုခုဖွဈနပွေီဆိုရငျ သိနိုငျတဲ့လက်ခဏာ (၉) မြိုး
‌ကျောက်ကပ်မှာ တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုရင် သိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာ (၉) မျိုး
‌ကျောက်ကပ်ရောဂါဟာ ထူးခြားတဲ့ရောဂါ လက္ခဏာမပြတဲ့အတွက် ရောဂါကျွမ်းတဲ့ အခြေအနေရောက်မှသာ သိကြတာမို့ ကျောက်ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိထားမိအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
‌ကျောက်ကပ်မကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ အဆိပ် အတောက်တွေ များလာစေသလို သွေးမသန့်တော့တာကြောင့် မောပန်းပြီး လေးလံ ထိုင်းမှိုင်းလာတတ်ပါတယ်
အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်း လျော့ကျလာကာ မူးဝေခြင်း၊ အားနည်းခြင်းတွေ ဖြစ်လာပြီဆို ရင် သတိထားဖို့လိုပါတယ်
‌ကျောက်ကပ်ထဲမှာ အဆိပ်အတောက်တွေ များလာတဲ့အတွက် ခံတွင်းပျက် တာဖြစ်နိုင်သလို လျှာက ကောင်း ကောင်းအရသာ မခံနိုင်တဲ့အတွက် အလိုလို အစားနည်းပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ပါ လျော့ကျစေပါတယ်
‌ကျောက်ကပ်ပျက်စီးနေတဲ့အခါ အဆိပ်အတောက်တွေ စစ်ထုတ် နိုင်စွမ်း လျော့နည်းလာတဲ့အတွက် ပြတဲ့လက္ခဏာ တစ်ခုလို့ဆို ရမှာပါ
‌ကျောက်ကပ် လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပုံမှန်မဟုတ် တော့ရင် ဆီးကနေတစ်ဆင့် အဆိပ်အတောက်တွေ စွန့်ထုတ်ပစ် တဲ့အစား သွေးထဲကို အဆိပ်အတောက်ဝင်သွားတာကြောင့်ပါ
၅.ဆီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထူးခြားမှုများ ကြုံခြင်း
ဆီးမကြာခဏသွားချင်တာတို့၊ ဆီးအမြှုပ်ထတာတို့၊ သွေးပါလာတာတို့ဆို မပေါ့ဆသင့်ပါဘူး
၆. ခြေဆစ်လက်ဆစ်များ ရောင်ရမ်းခြင်း
ဒီလက္ခဏာကတော့ ကျောက်ကပ်ရောဂါသာမက နှလုံးနဲ့အသည်း ရောဂါရှိနေရင်လည်း ပြတတ်ပါတယ်
ယားယံခြင်းကျောက်ကပ်ပြဿနာရှိနေတဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရနဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ မမျှတတော့ဘဲ ကိုယ်တွင်းအဆိပ်အတောက်တွေက အရေပြားဆီကို ရောက်သွားတဲ့အတွက်ပါ
ကိုယ်တွင်း အဆိပ်အတောက်တွေကို အော့အန်ခြင်းဖြင့် ထုတ်ပစ်တတ်တဲ့အတွက် သတိပြုစရာအချက်ပါ
‌ကျောက်ကပ်ပျက်စီးတဲ့အခါ လုံလောက်တဲ့ သွေးနီဥတွေထုတ်ပေး နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက် သွေး အားနည်းရောဂါ ဖြစ်လာစေပါတယ်
ကြောကျကပျရောဂါဟာ ထူးခွားတဲ့ရောဂါ လက်ခဏာမပွတဲ့အတှကျ ရောဂါကြှမျးတဲ့ အခွအေနရေောကျမှသာ သိကွတာမို့ ကြောကျကပျရောဂါနဲ့ပတျသကျပွီး သတိထားမိအောငျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ
ကြောကျကပျမကောငျးဘူးဆိုတာနဲ့ ခန်ဓာကိုယျတှငျးမှာ အဆိပျ အတောကျတှေ မြားလာစသေလို သှေးမသနျ့တော့တာကွောငျ့ မောပနျးပွီး လေးလံ ထိုငျးမှိုငျးလာတတျပါတယျ
အာရုံစူးစိုကျနိုငျစှမျး လြော့ကလြာကာ မူးဝခွေငျး၊ အားနညျးခွငျးတှေ ဖွဈလာပွီဆို ရငျ သတိထားဖို့လိုပါတယျ
ကြောကျကပျထဲမှာ အဆိပျအတောကျတှေ မြားလာတဲ့အတှကျ ခံတှငျးပကျြ တာဖွဈနိုငျသလို လြှာက ကောငျး ကောငျးအရသာ မခံနိုငျတဲ့အတှကျ အလိုလို အစားနညျးပွီး ကိုယျအလေးခြိနျပါ လြော့ကစြပေါတယျ
ကြောကျကပျပကျြစီးနတေဲ့အခါ အဆိပျအတောကျတှေ စဈထုတျ နိုငျစှမျး လြော့နညျးလာတဲ့အတှကျ ပွတဲ့လက်ခဏာ တဈခုလို့ဆို ရမှာပါ
ကြောကျကပျ လုပျငနျးစဉျတှေ ပုံမှနျမဟုတျ တော့ရငျ ဆီးကနတေဈဆငျ့ အဆိပျအတောကျတှေ စှနျ့ထုတျပဈ တဲ့အစား သှေးထဲကို အဆိပျအတောကျဝငျသှားတာကွောငျ့ပါ
၅.ဆီးနဲ့ပတျသကျပွီး ထူးခွားမှုမြား ကွုံခွငျး
ဆီးမကွာခဏသှားခငျြတာတို့၊ ဆီးအမွှုပျထတာတို့၊ သှေးပါလာတာတို့ဆို မပေါ့ဆသငျ့ပါဘူး
ဒီလက်ခဏာကတော့ ကြောကျကပျရောဂါသာမက နှလုံးနဲ့အသညျး ရောဂါရှိနရေငျလညျး ပွတတျပါတယျ
ယားယံခွငျးကြောကျကပျပွဿနာရှိနတေဲ့အခါမှာ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ လိုအပျတဲ့ အာဟာရနဲ့ သတ်တုဓာတျတှေ မမြှတတော့ဘဲ ကိုယျတှငျးအဆိပျအတောကျတှကေ အရပွေားဆီကို ရောကျသှားတဲ့အတှကျပါ
ကိုယျတှငျး အဆိပျအတောကျတှကေို အော့အနျခွငျးဖွငျ့ ထုတျပဈတတျတဲ့အတှကျ သတိပွုစရာအခကျြပါ
ကြောကျကပျပကျြစီးတဲ့အခါ လုံလောကျတဲ့ သှေးနီဥတှထေုတျပေး နိုငျခွငျးမရှိတော့တဲ့အတှကျ သှေး အားနညျးရောဂါ ဖွဈလာစပေါတယျ
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ကြောကျကပျမှာ တဈခုခုဖွဈနပွေီဆိုရငျ သိနိုငျတဲ့လက်ခဏာ (၉) မြိုး
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on နလေောငျခွငျးကို တိုကျခိုကျပေးမယျ့ အစားအစာမြား
သီဟိုဠျစေ့ စားခွငျးက ရရှိနိုငျတဲ့ အကြိုးကြေးဇူးမြား
Posted on October 14, 2020 October 14, 2020 by Shangyi
သီဟိုဠ်စေ့ စားခြင်းက ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
သီဟိုဠ်စေ့ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ၊ ဗီတာမင်တွေကို ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ အစားအစာပါ။ ဒီတော့ သီဟိုဠ်စေ့ဟာ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာတွေအထောက်အကူ ပြုသလဲဆိုတာလေး ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ကင်ဆာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်
သီဟိုဠ်စေ့မှာ ပါဝင်တဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးဟာ ကျူမာဆဲလ်တွေကို တိုက်ခိုက်ပစ်နိုင်ပြီး ထပ်မံပြန့်ပွားခြင်းကလည်း ကာကွယ်ပေးတာကြောင့် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားခြင်းကနေ ရာခိုင်နှုန်းနည်းသွားစေပါတယ်။
သီဟိုဠ်စေ့ဟာ အခြားအစေ့တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် အဆီအစိမ့်ပါဝင်မှုနှုန်း နည်းလွန်းပါတယ်။ သူက ကော်လက်စထရောလည်း မပါဝင်တာကြောင့် နှလုံးအားကောင်းစေပါတယ်။
သီဟိုဠ်စေ့မှာ မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်ပါဝင်တာကြောင့် သွေးပေါင်တက်တတ်တဲ့သူတွေ စားသုံးပေးဖို့လည်း သင့်တော်ပါတယ်။
သီဟိုဠ်စေ့မှာ ပါဝင်တဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေကြောင့် သင့်ဆံပင်အရောင်ဟာ အရင်ထက် ပိုမိုတောက်ပြောင်လာပါလိမ့်မယ်။
အရိုးအတွက် ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်လိုအပ်သလို သတ္တုဓာတ်လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ သတ္တုဓာတ်တွေ အားလုံးကို သီဟိုဠ်စေ့က ရနိုင်ပါတယ်။
အဆီတွေများတယ်လို့ ထင်ရနိုင်တဲ့ သီဟိုဠ်စေ့ဟာ တကယ်တော့ ကော်လက်စထရော ပါဝင်မှုမရှိပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သူ့ကို တစ်ပတ်နှစ်ခါ စားပေးတဲ့သူဟာ မစားတဲ့သူထက် ဝိတ်ပိုကျတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
သီဟိုဠ်စေ့မှာ ပါဝင်တဲ့ ကလာပ်စည်းတွေမှာပါရှိတဲ့ အက်ဆစ်ဓာတ်ကြောင့် အစာခြေမှုလမ်းကြောင်းအတွက် အထူးကောင်းမွန်စေပါတယ်။
သီဟိုဠျစဟေ့ာ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ လိုအပျတဲ့ သတ်တုဓာတျတှေ၊ ဗီတာမငျတှကေို ဖွညျ့ပေးနိုငျတဲ့ အစားအစာပါ။ ဒီတော့ သီဟိုဠျစဟေ့ာ သငျ့ကနျြးမာရေးအတှကျ ဘာတှအေထောကျအကူ ပွုသလဲဆိုတာလေး ပွောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ ကငျဆာကို ကာကှယျပေးနိုငျ
သီဟိုဠျစမှေ့ာ ပါဝငျတဲ့ ဓာတျတဈမြိုးဟာ ကြူမာဆဲလျတှကေို တိုကျခိုကျပဈနိုငျပွီး ထပျမံပွနျ့ပှားခွငျးကလညျး ကာကှယျပေးတာကွောငျ့ အူမကွီးကငျဆာဖွဈပှားခွငျးကနေ ရာခိုငျနှုနျးနညျးသှားစပေါတယျ။
သီဟိုဠျစဟေ့ာ အခွားအစတှေ့နေဲ့နှိုငျးယှဉျရငျ အဆီအစိမျ့ပါဝငျမှုနှုနျး နညျးလှနျးပါတယျ။ သူက ကျောလကျစထရောလညျး မပါဝငျတာကွောငျ့ နှလုံးအားကောငျးစပေါတယျ။
သီဟိုဠျစမှေ့ာ မဂ်ဂနီဆီယမျဓာတျပါဝငျတာကွောငျ့ သှေးပေါငျတကျတတျတဲ့သူတှေ စားသုံးပေးဖို့လညျး သငျ့တျောပါတယျ။
သီဟိုဠျစမှေ့ာ ပါဝငျတဲ့ သတ်တုဓာတျတှကွေောငျ့ သငျ့ဆံပငျအရောငျဟာ အရငျထကျ ပိုမိုတောကျပွောငျလာပါလိမျ့မယျ။
အရိုးအတှကျ ကယျဆီယမျဓာတျလိုအပျသလို သတ်တုဓာတျလညျး လိုအပျပါတယျ။ အဲ့ဒီ သတ်တုဓာတျတှေ အားလုံးကို သီဟိုဠျစကေ့ ရနိုငျပါတယျ။
အဆီတှမြေားတယျလို့ ထငျရနိုငျတဲ့ သီဟိုဠျစဟေ့ာ တကယျတော့ ကျောလကျစထရော ပါဝငျမှုမရှိပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ သူ့ကို တဈပတျနှဈခါ စားပေးတဲ့သူဟာ မစားတဲ့သူထကျ ဝိတျပိုကတြယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။
သီဟိုဠျစမှေ့ာ ပါဝငျတဲ့ ကလာပျစညျးတှမှောပါရှိတဲ့ အကျဆဈဓာတျကွောငျ့ အစာခွမှေုလမျးကွောငျးအတှကျ အထူးကောငျးမှနျစပေါတယျ။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on သီဟိုဠျစေ့ စားခွငျးက ရရှိနိုငျတဲ့ အကြိုးကြေးဇူးမြား
တုတ်ထိုးဆိုင်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြာဆံချက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသားတုဆိုတာကို တွေ့ဖူးစားဖူးကြမှာပါ။အသားတုကို သက်သက်လွတ်သမားတွေ အသားမစားတဲ့အခါမှာ ရသေ့စိတ်ဖြေအနေနဲ့ စားတတ်ကြပါတယ်။ပဲပုပ်ကနေလုပ်ထားတဲ့ အသားတုမှာ ပရိုတင်းဓာတ်တွေပြည့်ဝစွာပါဝင်တာမလို့ အာဟာရရှိစေတဲ့ အပြင် ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းကျိုးတွေလည်းရနိုင်မှာပါ။
ပဲပုပ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ အသားတုမှာ ပရိုတင်းဓာတ်တွေပါဝင်တာမလို့ နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အမိုင်နိုအက်စစ်( amino acid) ပါဝင်ပြီးတော့ ကိုလက်စတောကိုလည်း လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။သွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးနိုင်တာမလို့ နှလုံးသွေးကြောနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထူးကောင်းမွန်စေပါတယ်။
အသားတုမှာပါဝင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်က အစောခြေစနစ်ကို အထူးကောင်းမွန်စေပြီး ကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်တတ်တဲ့သူတွေ ဝမ်းချုပ်တတ်တဲ့ သူတွေအတွက် အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေဖို့ အသားတုကို စားပေးသင့်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးများ သွေးဆုံးပြီးတဲ့ အချိန်မှာ သွေးဆုံးကိုင်ဝေဒါနာကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခံစားရတာက အက်စထရိုဂျင်ဟော်မုန်းလျော့နည်းလာလို့ပါ။အသားတုကအက်စထရိုဂျင်ဟော်မုန်းကို ထိန်းညှိပေးနိုင်တာမလို့ သွေးဆုံးကိုင်ဝေဒနာကိုလည်း သက်သာစေမှာပါ။
Diet လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် အသားတုက အသုံးဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တစ်ခုပါ။လိုအပ်တဲ့ အသားဓာတ်ကိုလည်း ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တယ်။ဝနေတဲ့ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတွေအတွက် ခါးပါတ်လည်က အဆီတွေကိုတောင် ကျစေပါတယ်။အဝလွန်တာကိုလည်း ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တာမလို့ အသားဓာတ်လည်းရ ဝိတ်လည်းမတက်လာစေတဲ့ အသားတုကို ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းနေတဲ့သူတွေ စားသုံးသင့်ပါတယ်။
အသားတုမှာ ပရိုတင်းသာမကပဲ မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်က ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေနိုင်တာမလို့ ညဘက်ကို အိပ်မပျော်တတ်တဲ့သူများအတွက် အသားတုက ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အစားအစာတစ်ခုပါ။
လတ်ဆတ်တဲ့အသားတာလည်းဖြစ်ဖို့လိုသလို ဓာတုဆိုးဆေးတွေမပါဝင်မှသာ အခုဖော်ပြသွားတဲ့ ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
တုတျထိုးဆိုငျတှမှောပဲဖွဈဖွဈ ကွာဆံခကျြထဲမှာပဲဖွဈဖွဈအသားတုဆိုတာကို တှဖေူ့းစားဖူးကွမှာပါ။အသားတုကို သကျသကျလှတျသမားတှေ အသားမစားတဲ့အခါမှာ ရသစေိ့တျဖွအေနနေဲ့ စားတတျကွပါတယျ။ပဲပုပျကနလေုပျထားတဲ့ အသားတုမှာ ပရိုတငျးဓာတျတှပွေညျ့ဝစှာပါဝငျတာမလို့ အာဟာရရှိစတေဲ့ အပွငျ ကနျြးမာရေးအတှကျကောငျးကြိုးတှလေညျးရနိုငျမှာပါ။
ပဲပုပျနဲ့လုပျထားတဲ့ အသားတုမှာ ပရိုတငျးဓာတျတှပေါဝငျတာမလို့ နှလုံးကနျြးမာရေးအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ အမိုငျနိုအကျစဈ( amino acid) ပါဝငျပွီးတော့ ကိုလကျစတောကိုလညျး လြော့ကစြနေိုငျပါတယျ။သှေးပေါငျခြိနျကိုလညျး ထိနျးညှိပေးနိုငျတာမလို့ နှလုံးသှေးကွောနဲ့ပါတျသတျတဲ့ ကနျြးမာရေးကို အထူးကောငျးမှနျစပေါတယျ။
အသားတုမှာပါဝငျတဲ့ အမြှငျဓာတျက အစောခွစေနဈကို အထူးကောငျးမှနျစပွေီး ကိုယျတှငျးက အဆိပျအတောကျတှကေိုဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။ဝမျးလြှောဝမျးပကျြတတျတဲ့သူတှေ ဝမျးခြုပျတတျတဲ့ သူတှအေတှကျ အစာခွစေနဈကို ကောငျးမှနျစဖေို့ အသားတုကို စားပေးသငျ့ပါတယျ။
အမြိုးသမီးမြား သှေးဆုံးပွီးတဲ့ အခြိနျမှာ သှေးဆုံးကိုငျဝဒေါနာကို ခံစားရတတျပါတယျ။အဲ့ဒီလိုခံစားရတာက အကျစထရိုဂငျြဟျောမုနျးလြော့နညျးလာလို့ပါ။အသားတုကအကျစထရိုဂငျြဟျောမုနျးကို ထိနျးညှိပေးနိုငျတာမလို့ သှေးဆုံးကိုငျဝဒေနာကိုလညျး သကျသာစမှောပါ။
Diet လုပျနတေဲ့သူတှအေတှကျ အသားတုက အသုံးဝငျတဲ့ အာဟာရဓာတျတဈခုပါ။လိုအပျတဲ့ အသားဓာတျကိုလညျး ဖွညျ့တငျးပေးနိုငျတယျ။ဝနတေဲ့ အမြိုးသား အမြိုးသမီးတှအေတှကျ ခါးပါတျလညျက အဆီတှကေိုတောငျ ကစြပေါတယျ။အဝလှနျတာကိုလညျး ထိနျးခြုပျပေးနိုငျတာမလို့ အသားဓာတျလညျးရ ဝိတျလညျးမတကျလာစတေဲ့ အသားတုကို ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျထိနျးနတေဲ့သူတှေ စားသုံးသငျ့ပါတယျ။
အသားတုမှာ ပရိုတငျးသာမကပဲ မဂ်ဂနီဆီယမျဓာတျလညျးပါဝငျပါတယျ။မဂ်ဂနီဆီယမျဓာတျက ညဘကျကောငျးကောငျးအိပျပြျောစနေိုငျတာမလို့ ညဘကျကို အိပျမပြျောတတျတဲ့သူမြားအတှကျ အသားတုက ဆောငျထားသငျ့တဲ့ အစားအစာတဈခုပါ။
လတျဆတျတဲ့အသားတာလညျးဖွဈဖို့လိုသလို ဓာတုဆိုးဆေးတှမေပါဝငျမှသာ အခုဖျောပွသှားတဲ့ ကနျြးမာရေး ကောငျးကြိုးတှကေို ရရှိနိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on လူတှစေားစားနကွေတဲ့အသားတုမှာဘယျလိုကောငျးကြိုးတှရှေိလဲ